တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၂၁) ~ Htet Aung Kyaw
10:50 AM Htet Aung Kyaw7comments
God Army တပ်မှူးတွေ လက်နက်ချပြီ
ရတ်ချပူရီဆေးရုံစီးနင်းမှုဖြစ်ပြီး တနှစ်ဝန်းကျင်လောက် ကြာတဲ့အခါမှာတော့ God Army တပ်မှူး ၂ ဦး ဖြစ်တဲ့ ဂျော်နီနဲ့ လူသာထူး အပါအ၀င် တပ်ဖွဲ့ဝင်တဒါဇင်ခန့် ထိုင်းစစ်တပ်ဆီမှာ လက်နက်ချတယ်ဆိုပြီး သတင်းဝင်လာပါတယ်။ ထန်ဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ တဂိုလန်းကျေးရွာရှိ ကရင်သတင်း ရပ်ကွက်တခုကနေ ကျနော်ဆီဖုန်းဆက်လာတာပါ။ ကမာပုလောစခန်းကျပြီး ဆုတ်ခွာလာတဲ့ God Army နဲ့ VBSW မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာ တဂိုလမ်းနယ်စပ်ဘက်ရောက်လာပြီး ထိုင်းဘက်က ဖိအားများ လွန်းတဲ့အတွက် အခုလို လက်နက်ချဖို့ ဖြစ်လာတာလို့ သူတို့ကဆိုပါတယ်။
(God Army တပ်မှုး ၂ ဦးကို ၁၉၉၉ ၀န်းကျင်နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- AP)
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်းတရက်မှာ တဂိုလမ်းရွာနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ စ၀မ်ဖွန်း (Suan Phung) မြို့က ထိုင်း-နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းတခုမှာ ကျင်းပတဲ့ God Army သတင်းစာရှင်းပွဲဆီ ကျနော်ရောက်သွားပါတယ်။ နယ်စပ်နဲ့တောတောင်တွေထဲ တယောက်တည်းသွားနေကြ ကျနော်ဟာ အခုလို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ရမယ့် ပွဲမျိုးဆိုရင် တယောက်တည်း မသွားရဲပါ။ ဒီတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ID ခိုင်တဲ့ သတင်းသမားမိတ်ဆွေတွေ လိုက်ရှာရတာပေါ့။
ဒီတကြိမ် ကျနော်နဲ့တွဲမိတဲ့ ကံဆိုးသူတဦးကတော့ BBC မြန်မာပိုင်းမှ သတင်းသမား ကိုကိုအောင်ပါ။ BBC ရုံးက ကားနဲ့သွားမယ်လို့ပြင်ထားပြီးမှ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ အဲဒီကားက အဆင်သင့်ဖြစ်မနေပါ။ ဒီတော့ နီးစပ်ရာ (Taxi Meter) တက္ကစီတစီးကိုငှားပြီး ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ရတ်ချပူရီခရိုင်ထဲက စ၀မ်ဖွန်းမြို့ဆီ ထွက်လာပါတယ်။ သတင်းစာရှင်းပွဲလုပ်မယ့် အချိန်က နေ့လယ် ၁ နာရီ၊ ကျနော်တို့ ထွက်လာတဲ့အချိန်က မနက် ၁၀ နာရီကျော်နေပြီ။ ကားမောင်းချိန်က ၂ နှစ်ရီကျော်မယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။
ကားသမားက အင်္ဂလိပ်စကားသိပ်မရ။ ကျနော်တို့ကလည်း ထိုင်းစကားသိပ်မရ။ ဒီတော့ ထိုင်းတ၀က်၊ အင်္ဂလိပ်တ၀က်နဲ့ စကားပြောကြပြီး ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာသတင်းထောက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ God Army ပွဲကို သတင်းသွားယူဖို့ လာကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးအခြေနေအကြောင်းတွေပါ ပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကားသမားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုက ရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို ထောက်ခံကြောင်း ''ဒီး ဒီး'' နဲ့ လက်မထောင်ပြနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရှင်းပြတာကို တကယ်နားလည်လို့ လက်မထောင်ပြတာလား။ သူ့ကားကိုငှားလာလို့ တာဝန်အရ ထောင်ပြတာလားဆိုတာကတော့ သိပ်မကွဲပြားလှ။
နေ့လယ် ၁ နာရီမထိုးခင်လေးမှာ ရဲစခန်းနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ တောချတော (နယ်ခြားစောင့်တပ်) တပ်ရင်း ဆီ ရောက်သွားတော့ ကျနော်တို့ အရင်ရောက်နေတဲ့ သတင်းထောက်ကားတွေအများကြီး။ အတော် များများက သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနက တံဆိပ်ပါတဲ့ကားတွေ၊ ပြီးတော့ ပေါင်မှုန့်ကားလို့ခေါ်ကြတဲ့ အဖြူရောင်ဗင်ကားတွေ။ ထူးထူးခြားခြား Taxi Meter တံဆိပ်ကြီးနဲ့ ၀င်လာတဲ့သတင်းထောက်ဆိုလို့ ကျနော်တို့ နှစ်ဦးပဲရှိပါတယ်။ သတင်းယူဖို့လာတာပဲ။ ဘယ်ကားနဲ့လာလာ ရောက်ဖို့က အဓိက မဟုတ် ပါလား။
သတင်းထောက်ကနေ အချုပ်သားဖြစ်သွားတဲ့ ခဏတာ
အဲဒါက ကျနော်တို့သတင်းသမားတွေဘက်က စဉ်းစားချက်ပါ။ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်က စဉ်း စားပုံက ကျနော်တို့နဲ့တူပုံမရ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုိရင် ဒီပွဲဟာ God Army သတင်းစာရှင်းပွဲဆိုပေမယ့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ချွမ်လိပိုင်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဆုရာယုတို့ကိုယ်တိုင် လာရောက်မှာဖြစ်ပြီး နယ် စပ်အနီးမှာကျင်းပမယ့် ပွဲဖြစ်တာကြောင့် လုံခြုံရေးကို အထူးတင်းကျပ်ထားပုံရပါတယ်။ ကျနော်တို့က တော့ ဒါတွေကို မစဉ်းစားဖြစ်ပါဘူး။ သတင်းစာရှင်းပွဲလုပ်မယ့် အဆောက်ဦရှေ့က အခြားသတင်း ထောက်တွေနဲ့အတူရောပြီး မိုက်ကရိုိဖုန်းထုတ်၊ တယ်လီဖုန်းဆက်နဲ့ သတင်းယူဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ကြ ပါတယ်။
(၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်နာဝါရီလမှာ လက်နက်ချခဲ့တဲ့ God Army တပ်မှုးများ။ ဓာတ်ပုံ- ထက်အောင်ကျော်)
အဲဒီအချိန်မှာ အနက်ရောင်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်စစ်သား ၃-၄ ဦးရောက်လာပြီး ''ခင် ဗျားတို့ မြန်မာတွေလား'' လို့ ထိုင်းဘာသာနဲ့ မေးပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ပေါ့။ သူက BBC က၊ ကျနော်က DVB ကဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ သတင်းထောက်ကတ်ပြခိုင်းတော့ ကျနော့်မှာ ဘာမှပြစရာမရှိ။ ကိုကို အောင်က ကတ်မေ့ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Passport ပြပါလို့ ပြောပါတယ်။ ကိုကို အောင်က Passport ပါမလာတဲ့အတွက် BBC Work Permit စာအုပ်ကို ပြလိုက်ပါတယ်။ ခက် နေတာက ကျနော်။
ကျနော်မှာ Passport ပါလာပေမယ့် အဲဒါကအတုကြီး၊ ရွဲလည်း အတော်ရွဲနေတယ်ဆိုတော့ အဲဒါကြီး ပြလိုက်မှ စာအုပ်အတုမှုနဲ့ အဖမ်းခံနေရရင် ပိုဆိုးမယ်ဆိုပြီး ဘာမှမပြဘဲ မယုံရင် အော်စလိုရုံးကို ဖုန်း ဆက်ပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် အော်စလိုမှာ မနက် ၆ နာရီဆိုတော့ ရုံးမှာ ဘယ်သူမှရှိပုံမရ။ ဒီတော့ ထိုင်းစစ်သားတွေက ကျနော်အပေါ် သံသယ၀င်လာပုံရပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စလုံး ကို (တကယ်က ဖမ်းသွားတဲ့သဘော) လုံခြုံရေးဂိတ်တဲထဲခေါ်ပြီး ထိုင်းခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော် တို့ရဲ့ ရီကော်ဒါထဲက အသံတွေ၊ မှတ်စုထဲက ဖုန်းနံပါတ်တွေကို စစ်ပါတယ်။
ကံကဆိုးချင်တော့ ကျနော်မှတ်စုထဲက ဖုန်းနံပါတ်စာရင်းထဲမှာ ထန်းဟင်ဒုက္ခသည်စခန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် နဲ့နံပါတ်တွေ၊ KNU တပ်မဟာ ၄ က ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမည်နဲ့ နံပါတ်တွေကို တွေ့သွားပါတယ်။ ''ခင်ဗျား Passport နဲ့ ရန်ကုန်ကနေလာတာလား၊ နယ်စပ်အဖွဲ့စည်းတခုခုကလား'' ဆိုပြီး ထိုင်းစစ် ဗိုလ်ကမေးပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ လာတဲ့အကြောင်း၊ သတင်းထောက်တာဝန်အရ နယ်စပ်က လူတွေ အားလုံးနဲ့ အဆက်သွယ်ရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြပေမယ့် ထိုင်းစစ်ဗိုလ်က ကျနော့်ကိုမယုံတော့ပါ။ ကို ကိုအောင်ကို သွားချင်သွားလို့ရပြီ။ ဒီလူကိုတော့ ဒီမှာ ခဏထားခဲ့ပါ ဆိုပြီး အဲဒီစစ်ဗိုလ်က ပြောနေပါ တယ်။
အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသံ၊ တခြားသတင်းထောက် တွေရဲ့ကားတွေ ထပ်ရောက်လာသံကြားနေရပြီး သတင်းစာရှင်းပွဲစဖို့ ဖိတ်ခေါ်သံပါ ကြားနေရပါပြီ။ ကိုကိုအောင်လည်း ကျနော့်ကိုထားပြီး ထွက်သွားရမလား ဝေခွဲရခက်နေပုံပါပဲ။ ထိုင်း TV သတင်း ထောက်တွေကလည်း ကျနော်တို့ကို TV ရိုက်နေကြပါပြီ။ သတင်းလာယူတဲ့ သတင်းထောက်က သ တင်းဖန်တီးသူဖြစ်ရတော့မယ့် ကိန်းပါပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ လုံခြုံရေးဂိတ်တဲရှေ့လာရပ်တဲ့ ကားပေါ်ကဆင်းလာသူ သ တင်းထောက်တွေထဲ ကျနော်နဲ့အတူ အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတူသွားဖူးတဲ့၊ ကျနော်ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ဖူး တဲ့ the Nation သတင်းစာက နာမည်ကြီးသတင်းထောက် ဒွန်ပါသန်ကို ကျနော်လှမ်းမြင်လိုက် ပါတယ်။ သူ့ကိုအော်ခေါ်ပြီး အခြေနေကိုရှင်းပြတော့ သူက ထိုင်းစစ်ဗိုလ်နဲ့ ထိုင်းဘာသာနဲ့ ပြောနေပါ တယ်။ ကျနော်က သိပ်နားမလည်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူပြောတဲ့အထဲ တာ့ဆင်တို့၊ ချွမ်လိပိုင်တို့၊ အတိုက်ခံ တို့၊ အစိုးရတို့ ပါနေတဲ့အတွက် အတိုက်ခံသတင်းဌာနဘက်က ကျနော်လည်း သတင်းယူခွင့်ရှိကြောင်း၊ ကျနော့်ကို သူ ကောင်းကောင်းသိကြောင်း၊ သူတာဝန်ယူကြောင်း စသဖြင့်ပြောတော့ ထိုင်းစစ်ဗိုလ်က ကျနော့်ကို ဆက်ဖမ်းထားဖို့ ခက်သွားပုံရပါတယ်။
သတင်းယူခွင့်တော့ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆီက အရပ်ဝတ်လုံခြုံရေးတဦးက အနီးကပ်လိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လိုက်ချင်လိုက်ပေါ့။ ဟိုမှာ သတင်းစာရှင်းပွဲက စတော့မယ်။ အမြန်လုပ် ကြလို့ပြောပြီး ကျနော်တို့အားလုံး သတင်းစာရှင်းပွဲလုပ်တဲ့ အခန်းဘက် ပြေးလာကြပါတယ်။ အရပ်ဝတ် သန်မာထွားကြိုင်း စစ်ဗိုလ်တဦးကလည်း ကျနော်ဘေးကနေ ယှဉ်ပြေးလို့ပေါ့။
တွေ့ပါပြီ။ ဟိုမှာ မဟာနာမည်ကျော် God Army ဘုရားသခင်းတပ်မတော်က တပ်မှူးကြီးနှစ်ဦး။ တ ကယ့်ကလေးလေးတွေ။ အသက်ကရှိလှ ၁၂-၁၃ ပေါ့။ တဦးက ဆံပင်ရှည်ကို ဒီတိုင်းထားထား ဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် နောက်တဦးကတော့ ဆံပင်ညှပ်ထားပါတယ်။ သူတို့ဘေးမှာလည်း သူတို့နဲ့သက်တူရွယ်တူ ကလေးငယ် တဒါဇင်ခန့်ရှိမယ်။ ကလေးတဦးရဲ့လက်ထဲမှာဆို ဘောလုံးလေးတလုံးပိုက်လို့။ အခမ်း အနားက သူပုန်တွေ လက်နက်ချပွဲနဲ့မတူပဲ ဒုက္ခသည်စခန်းက ကလေးငယ်တစုကို တွေ့ရသလိုမျိုး ဖြစ် နေပါတယ်။
သူတို့နောက်မှာတော့ မိဘလို့ယူဆရသူ အသက် ၄၀-၅၀ အရွယ် လူကြီး ၃-၄ ဦး။ နာမည်ကြီးလှတဲ့ God Army တပ်မှူးတွေကို ဓာတ်ပုံတွေ၊ TV တွေထဲမှာ တွေ့ဖူးပြီးဖြစ်ပေမယ့် အရှင်လတ် လတ် အပြင်မှာ တွေ့ဖူးတာကတော့ ဒါ ပထမ ဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။ အဝေးကနေ ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်တာ အားမရလို့ အနီးကပ်ဝင်ရိုက်ဖို့ပြင်တော့ ကျနော်ဘေးနားရပ်နေတဲ့ ကိုသန်မာက ခွင့်မပြုပြပါဘူး။ သူ့ဗလနဲ့တားပြီး ဒီထက် ရှေ့တိုးခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အင်း ဒုက္ခပါပဲ။ သူတို့ဆီသွားမရရင် မင်းတို့ ၀န်ကြီးချုပ်ဆီ သွားရိုက်မယ်ကွာလို့ စိတ်ထဲကပြောပြီး မစ္စ တာချွမ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဆုရာယုတို့ကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က လုံးဝမတားပါဘူး။ ထိုင်းလုံခြုံရေး ကလည်း တမျိုးကြီးပါလား။ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ၊ စစ်ဦးစီးချုပ်တွေထက် God Army က ကလေးတပ်မှူး တွေ ကို ပိုအလေးထားနေရသလားဆိုပြီး ကျနော်စိတ်ထဲက ပြောမိပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းပွဲပြီးလို့ ကားပေါ်ပြန်တက်ခါနီးမှ နယ်ခြားစောင့်ရဲ့ တပ်ရင်းမှူးကိုယ်တိုင် ကျနော်တို့ကို လာရောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး နားလည်မှု လွဲခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါကြောင်း စကားပြန်က တ ဆင့် ပြောပါတယ်။ ဘာကိုနားလည်မှုလွဲတာလဲဆိုတာကို ကျနော်က သိပ်သဘောမပေါက်ပါ။ ဘန် ကောက်အပြန်လမ်း Taxi ပေါ်ရောက်ပြီး ကားဆရာက အကြောင်းစုံရှင်းပြမှ ''ဟိုက် ဒီလိုလား'' ဆိုပြီး အံ့သြမိပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက ကျနော်တို့မြန်မာနှစ်ဦး နယ်စပ်အထိရောက်လာတာကို သံသယရှိတဲ့အတွက် ကားဆရာကို စစ်ဗိုလ်က ခေါ်မေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြောင်း ကျနော်တို့ ပွားထားတာကို မတတ်တခေါက်နားလည်ထားတဲ့ ကားဆရာက ကျနော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီအရေးအားပေးသူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ နယ်စပ်က အဖွဲ့တွေနဲ့သိသူတွေ စသဖြင့် ပြောလိုက်ရာကနေ ထိုင်းဘက်က သံသ ယ ပိုဝင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်နက်ချလိုက်တဲ့ God Army တပ်မှူးတွေကို အနီးကပ် လုပ်ကြံဖို့၊ ဒီလိုလက်နက်ချတာကို သဘောမတူတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေက သတင်းထောက် အ ယောင်ဆောင် ရောက်လာတယ်ဆိုပြီး ထိုင်းစစ်တပ်က သံသယရှိသွားတယ်ဆိုတာကို သိရတော့မှ ကျနော်အတော်စိုးရိမ်သွား မိပါတယ်။
ကိုဂျော်နီနဲ့ VBSW ဘယ်မှာလဲ
အဲဒါ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်နာဝါရီလကအခြေနေပါ။ အခု ၁၄ နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန် ကြားသိရသမျှ အချက်လက်တွေကို ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ God Army က လက်နက်ချတဲ့ လူတွေအားလုံးကို ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်အနီးရှိ ဘန်ဒုံယန်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာ နေခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် တတိယ နိုင်ငံတွေကို ထွက်ခွာသွားကြပြီး တပ်မှူးနှစ်ဦးထဲက တဦးဖြစ်သူ လူသာထူးဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် က ဆွီဒင်နိုင်ငံဆီ ရောက်သွားပါတယ်။ ဂျော်နီထူးကတော့ တတိယ နိုင်ငံဆီမထွက်ပဲ ကန်ချနပူရီ-ထား ၀ယ် အဝေးပြေးကားလမ်းပေါ်ရှိ မေတ္တာကျေးရွာဆီ ပြန်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(ကျဆုံးသွားတဲ့ ကိုဗေဒါနဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကိုဂျော်နီတို့ကို တောတွင်းစခန်းတခုမှာတွေ့ရစဉ်)
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ထွက်လာတဲ့ AP သတင်းတပုဒ်အရ အခု အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ လူသာထူးဟာ ဆွီဒင်ကနေ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘန်းဒုံယန်းစခန်းဆီ ပြန်လာပြီး သူ့အကို ဂျော်နီထူးအပါဝင် ဆွေမျိုးတွေနဲ့ လာတွေ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့လက်နက် ချစဉ်က ထိုင်းစစ်ဘက်က ခေါ်ယူသွားပြီး အခုချိန်ထိ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင် လူ ၅၅ ဦးကိစ္စကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ထိုင်းလူ့အခွင့်ရေးရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ရပါ တယ်။
ဒါက God Army အမွှာညီအကို ဂျော်နီနဲ့ လူသာထူးတို့အခြေနေပါ။ ဒါပေမယ့် တချိန်က သူတို့ရဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့၊ ကမာပုလောစခန်းကျတဲ့အထိ သူတို့နဲ့အတူ နေထိုင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သံရုံးသိမ်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျော်နီနဲ့ မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များ VBSW အဖွဲ့ဝင်တွေ အကြောင်းတော့ ဘယ်သတင်းဌာနကမှ ပြန်ရေးတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
ကျနော်ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှ မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင် ကမာပုလော စခန်းကျပြီးတဲ့နောက် God Army က အခုလို လက်နက်ချသွားပေမယ့် VBSW မှ ကိုဂျော်နီတို့က လက်မချပဲ တဂိုလန်း နောက်ကျောဘက်ရှိ KNU တပ်မဟာ ၄ ဒေသမှာ ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းဘက်က ဖိအားပေးမှု အရမ်းများနေတဲ့အတွက် မြန်မာအတိုက်ခံအများစုတည်ရှိရာ KNU တပ်မဟာ ၆ နဲ့ မဲဆောက်ဒေသဘက်ဆီရွှေ့ဖို့ တပ်ပေါင်းစု NCUB က စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအဆိုပြုချက်အရ KNU ဗဟိုကော်မတီမှ မန်းငြိမ်းမောင်နဲ့ ကိုဂျော်နီနဲ့ တနယ်တည်းသား NLD-LA မှ ဦးမြင့်သိန်းတို့ ပါဝင် တဲ့ တပ်ပေါင်းစုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တခုဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက (အခု ဖုနန်းလွန်-ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်အနီး) KNU တပ်မဟာ ၄ တောတွင်းစခန်းဆီ ရောက်လာာပြီး ကိုဂျော်နီနဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်တွေ အပြောတိုင်းဆိုရင်တော့ အဲဒီဆွေးနွေးမှုကို ကိုဂျော်နီက လက်ခံပြီး မဲ ဆောက်ဘက်ကိုပြောင်းဖို့ သဘောတူခဲ့ကြောင်း၊ မန်းငြိမ်းမောင်နဲ့ ဦးမြင့်သိန်းတို့ကလည်း တပ်ပေါင်းစု ဘက် အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပြီးရင် ထောက်လှမ်းရေးကားနဲ့ အသေချာလာခေါ်မယ်လို့ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အဖွဲ့ နယ်စပ်ရောက်တာနဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးပြီး ကွန်ပျူ တာတွေ၊ ကင်မရာတွေကို သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ မန်းငြိမ်းမောင်နဲ့ ဦးမြင့်သိန်းတို့က DVB ကို ပြောပြခဲ့ဖူး ပါတယ်။
သူတို့ပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်ဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကျမှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီချိန်မှ ပြန် ပြောသလဲဆိုရင် ကိုဂျော်နီတို့ ပျောက်ဆုံးသွားတာကို ပျောက်ပျောက်ခြင်းအချိန်မှာ ဘယ်သူမှမသိဘဲ အဲဒီအချိန်ကျမှ VBSW အဖွဲ့ကနေ ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြီး နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေဆီ ပေးပို့ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကြေညာချက်အရ လိုက်မေးတော့မှ သူတို့လည်း ဒီသတင်းကို အခုမှကြား ရတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ပြန်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သူတို့ဘာမှမသိ ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။
အဲဒီကာလက ဖုနန်းလွန်နယ်စပ်နဲ့ ကန်ချပူရီမြို့ဝန်းကျင်ရှိ သတင်းရပ်ကွက်တွေရဲ့ ပြန်ပြောပြချက် အရနဲ့ VBSW ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နဲ့ ဦးမြင့်သိန်းတို့ ပြန်သွားတဲ့ညမှာပဲ ထိုင်း စစ်တပ်နဲ့ အမည်မသိ ကရင်အဖွဲ့တခုက NCUB က လာခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပုံမှားရိုက်ပြီး ကိုဂျော်နီတို့ကို လာခေါ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU နယ်ကနေ ထိုင်းနယ်ထဲအဖြတ် ကားရပ်ထားတဲ့နေရာရောက်မှ သူ့ကိုဖမ်းမှန်းသိတဲ့အတွက် ကိုဂျော်နီ ဘယ်လိုမှပြေးမလွတ်တော့ဘူးလို့ နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်တွေ က ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ သူကိုလေးစားသူတွေက သူ့အကြောင်း ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်၊ စုံစမ်းအရေးယူ မယ်လို့ပြောလေ့ရှိပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ ကိုဂျော်နီ ဘယ်လိုပျောက် သွားသလဲ၊ ဘယ်သူတွေမှာတာ ၀န်ရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူကမှ အတိအကျမသိနိုင်ဖြစ်နေဆဲပါ။ ။
July 29, 2014 at 10:55 AM Reply
By THANYARAT DOKSONE and GRANT PECK November 2, 2013 12:15 PM
This combination of Dec. 6, 1999 and Sept. 26, 2013 photos shows Luther Htoo, left, and his brother Johnny at their jungle camp in Myanmar and 14 years later in western Thailand.
When they were kids, the twins were bulletproof and invulnerable to land mines - or so went the story that briefly made them famous as hundreds of guerrillas followed and even worshipped them in the southeastern jungles of Myanmar. Overadecade later, their "God’s Army" is no more, and the twins' greatest accomplishment may be that both are still alive. (AP Photo/Apichart Weerawong)
SANGKHLABURI, Thailand (AP) — When they were kids, Johnny and Luther Htoo were bulletproof and invulnerable to land mines — or so went the story that briefly made them famous as hundreds of guerrillas followed and even worshipped them in the southeastern jungles of Myanmar. Today, well overadecade later, their "God's Army" is no more, and the twins' greatest accomplishment may be that both are still alive.
"It's not fun to fight anymore, now that I'm afraid to die. No one wants to fight unless they have to, you know," Luther said.
The legend of the twins began to form in 1997, when Myanmar troops entered their village duringasweep of Karen territory. At the time, the rebel Karen National Union was in sharp decline.
"We had to defend ourselves because we didn't like anyone to hurt us," Luther recalled. "We love our motherland, so we chose to fight. We got seven rifles from the KNU and there were seven of us. We used them to fight against the Burmese army. We prayed before we fought, and then we won."
They dubbed themselves God's Army. The boys were rambunctious, but strict discipline was maintained, as well asarigorous Christian routine. There was no liquor in their village andachurch service was held at least onceaday.
Journalists were amazed when they traveled to their small village of Ka Mar Pa Law, far from any towns or even paved roads. Video showed the twins living what looked likeakid's pirate fantasy, shooting tropical fruit off the trees and being worshipped by adult followers who carried them around on their shoulders.
Probably the most famous image of the twins was shot by Associated Press photographer Apichart Weerawong when they were 12. The tightly cropped portrait shows Luther with shaved forelocks and raised brows, insouciantly puffing onahand-rolled cigarette. Johnny, with neatly parted and combed long hair, softly feminine face andasad, soulful gaze, stands behind his brother's right shoulder.
A joint interview with the AP last month highlighted the very different lives the Htoo brothers have led since then.
July 29, 2014 at 10:57 AM Reply
Luther now lives in Götene,atown 335 kilometers (208 miles) west of Stockholm, where he studied economics, history and other liberal arts subjects and has worked several jobs, including caregiver for the elderly. While in Sweden, he marriedaKaren woman from another tribe and hadachild with her, but they later got divorced, the child staying with the mother.
"I like Sweden but it's very cold. Cold and snow, but I like it there because the country is peaceful," Luther said. "There's no one shooting at each other and no one hurting each other."
Johnny eventually settled down to work asarice farmer but returned less thanayear ago to the refugee camp in Thailand where he had stayed with Luther. He was shy during the interview and inclined to defer to his brother.
"Their wives and children have been waiting," he said. "It's been 13 years. I think all of them are dead."
They may have been victims ofacalamitous turn in God's Army's fortunes that came after it became enmeshed with an even more fringe Myanmar anti-government group.
The so-called Vigorous Burmese Student Warriors seized the Myanmar Embassy in the Thai capital, Bangkok, in 1999. Afterashort siege, Thai officials arrangedagetaway by helicopter for them to the Myanmar border area where God's Army was based.
Johnny and Luther took them in. But the student warriors were targets of two countries, Myanmar and Thailand, which lost face from the embassy takeover despite resolving it peacefully. Reportedly, Thailand began shelling the twins' village to help corner the embassy raiders.
Shambles turned to disaster when the student warriors and some God's Army members crossed back into Thailand and seizedaprovincial hospital in Ratchaburi in 2000.
By Luther's account, student warriors and some members of God's Army went to the hospital to ask for medicine and doctors to help people wounded by the shelling. He did not explain why they went armed.
God's Army quickly fell, and the boys surrendered at their village. They were treated well, but their comrades, who lacked the shield of international publicity, may not have been.
"They were separated into groups of men, women and children. The Thai soldiers took 55 men with them and said they would be brought to work for the soldiers," Luther told members of the Lawyers Council of Thailand as he sought their advice on tracking down the men. "Since that day, no one ever saw them again."
Luther and Johnny stayed together atarefugee camp in Thailand, but later became separated. In 2006, Myanmar state television reported that Johnny and eight of his God's Army comrades had turned themselves in because "they could not put up with the bullying of fellow rebels" and realized "the goodwill of the government."
Luther said the truth is that Johnny was lured back to Myanmar by false promises of work. A "surrender" was staged for TV, he said, with uniforms andahandover of weapons that didn't belong to them.
Now Luther is helping Johnny seek ways to stay with their mother and sister, who now live in New Zealand. "But I will have talk toalot of people to make that happen," Luther said. Their father lives in another Thai refugee camp.
The AP interview marked the last time Luther and Johnny would see each other before Luther returned to Sweden. As the brothers parted, Johnny's eyes appeared to well with tears.
October 6, 2015 at 12:56 AM Reply
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၄၈
3:37 AM HTET AUNG KYAW NO COMMENTS
ထက်အောင်ကျော်| October 17, 2012 ။ ဧရာဝတီ။
သံရုံးသိမ်း သေနတ်သမားနှင့် အင်တာဗျုးခြင်း
အဲဒီလို ဘာ ID မှ မရှိတာကိုက ကံကောင်းသွားတယ် ပြောရမလားပါပဲ။ တခြားသတင်းထောက်တွေ သံရုံးရှေ့ပြေးနေချိန်မှာ သူတို့လို မပြေးနိုင်တဲ့ကျနော်က ရုံးခန်းကျဉ်းကျဉ်းထဲမှာ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ် ဆက်ရင်းနဲ့ NGO သတင်းရပ်ကွက်ဆီကနေ သံရုံးဖုန်းနံပတ်တခု ရလိုက်ပါတယ်။ ရမ်းသမ်းပြီးနှိပ်ထည့်လိုက်တော့ “ဆ၀ါဒီခပ်” ဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်တဲ့လူက ထိုင်းလိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူ့အသံ ထိုင်းအသံ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ရိပ်မိတာနဲ့ ထိုင်းလိုပြန်မပြောတော့ဘဲ “ကျနော် DVB ကပါ။ အဲ …” ဆိုပြီး စကားဆက်ဖို့ အရှိန်ယူနေတုန်း။
သံရုံးကို ဝင်စီးတဲ့အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုဂျော်နီကို ဆေးရုံကိုဝင်စီးတဲ့ ကိုဗေဒါနဲ့အတူ နယ်စပ်စခန်းတခုတွင် တွေ့ရစဉ်
“DVB နော်ဝေလား။ ဘယ်သူလဲမသိဘူး” ဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်မေးပါတယ်။ တကယ်က ကျနော့်သတင်းထောက်အမည် ”ထက်အောင်ကျော်” ဆိုတာကို ပြောရမယ့်အစား မေ့ပြီးတော့ အမည်ရင်းဖြစ်တဲ့ “၀င်းထိန်ပါ … ကျနော်။ ခင်ဗျားတို့ အဲဒီ … ဟိုကိစ္စ ဘာပြောလို့ရမလဲ၊ နောက်ဆုံးအခြေနေ” ဆိုပြီး အစီစဉ်တကျမဟုတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ထွက်သွားပါတယ်။
”သြော် … နော်ဝေးအသံကိုလား။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့သိမ်းထားတယ်။ သံရုံးကို စီးထားလိုက်ပြီ” ဆိုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီအချိန်မှာ အသေချာ မေးခွန်းဆက်မေးရမယ့်အစား အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ သတင်းထောက်ပီပီ “ဒီနံပါတ်က သံရုံးနံပါတ်ဟုတ်ပါတယ်နော်” ဆိုပြီး သွားမေး မိပါတယ်။ တော်သေးတယ်။ ဟိုဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်က စိတ်ဆိုးပြီး ဖုန်းချမသွားလို့။ ပြီးတော့ ကျနော်စမေးတဲ့ မေးခွန်းကကြည့်ပါဦး၊ “ခင်ဗျားတို့ ဘာပြောချင်လဲ။ ပြောချင်တာတွေအကုန်လုံး ပြောထားခဲ့ဗျာ” တဲ့။
“ကျနော်ဘာမှ မပြောနိုင်သေးဘူး။ စတိတ်မန့်ထဲမှာ ပါသလောက်ပဲ ပြောနိုင်ဦးမယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ကျနော်တို့ တောင်းထားပါတယ်။ ခင်ဗျား စတိတ်မန့် ရပြီးပြီမို့လား” လို့ ပြန်မေးပါတယ်။ မရသေးရင် Fax နံပါတ်ပေး၊ သူပို့ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုံးက ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ဖွင့်ထားရတာဆိုတော့ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အရပ်ဆီ Fax နံပါတ်ပေးလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဒါနဲ့ အသံနဲ့ လိုချင်လို့ပါ။ ဘာညာ ညှိရတာ တမိနစ်လောက်ကြာသွားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျနော်မေးမယ်၊ ခင်ဗျားဖြေဗျာ ဆိုပြီးပြောတော့ “အိုကေ” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့က ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ။ ဘာကြောင့် အခုလိုဝင်စီးတာလဲ ဆိုပြီး စမေးဖြစ်ပါတယ်။ “ကျနော်တို့က ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက်အောက်ခံမှမဟုတ်ဘူး။ Vigorous Burmese Students Warrior စွမ်းအားမြင့် ကျောင်းသားစစ်သည်တော်များအဖွဲ့။ ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မှ မဆိုင်ဘူး။ အခုမှ အသစ်ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့” ဆိုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာကြောင့် ၀င်သိမ်းလဲဆိုတော့ ဒီကောင်တွေက ပြည်သူက ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ လူတွေမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာသူ သေနတ်နဲ့ အာဏာသိမ်းပြီး လျှောက်လုပ်နေတာ။ ကျနော်တို့က တော်လှန်ရေးသမားတွေပဲ။ ပြည်သူဘက်က လူတွေပဲ။ ဒါကြောင့် ၀င်သိမ်းတာလို့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိမှာလားဆိုပြီး ဆက်မေးတော့ “မိထားတဲ့ ဓားစားခံတွေကိုဖမ်းပြီး တော်လှန်ရေးနယ်မြေကို ပြန်ဆုတ်မယ်။ ထိုင်းနဲ့ ညှိမယ်။ ထိုင်းကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာသံရုံးဟာ မြန်မာပိုင်နက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ လက်နက်ချဖို့ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့အတူ မဟာမိတ် God Army လည်း ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ Mediator လိုင်းကနေ ၀င်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ မဟုတ်ရင် အားလုံးသေကုန်မယ်။ လက်နက်ချဖို့မရှိဘူး” ဆိုပြီး အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်ပြောပါတယ်။
October 6, 2015 at 12:57 AM Reply
မင်းသမီးစခန်းကနေ ထွက်လာတဲ့ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအ၀င် ကျောင်းသားတချို့ ၉ လေးလုံးအကြိုကာလ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြစဉ်
တကယ်က အဲဒီလို အရှိန်ကောင်းနေတုန်း မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်စိတ်ထဲ ဒီလူ တကယ်ပြောနေတာရော ဟုတ်ရဲ့လား။ သံရုံးနံပါတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး သံသယ ထပ်ဝင်လာပြန်ပါတယ်။ “ခင်ဗျား သံရုံးထဲကပြောနေတာ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ခင်ဗျားနာမည်နဲ့ တာဝန်ကို ပြောနိုင်မလားဗျ။ ကျနော် အတည်ပြုချက် ယူချင်လို့ပါ” ဆိုပြီး သွားမေးမိပြန်ပါတယ်။
”နာမည်။ နာမည်က အကုန်လုံးသိနေပြီဗျ။ By Name နဲ့တောင် Fax တွေဝင်လာနေပြီ။ ကျနော့်နာမည် ဂျော်နီပဲ” ဆိုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ဖြေပါတယ်။ ပြီးတော့ သေနတ်သံတွေ၊ မှန်ပြူတင်းကွဲသံတွေ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ”ဒါပဲနော်။ ကျနော် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ စကားပြောရဦးမယ်” လို့ပြောပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ်။ အဲဒါဟာ အတွေ့အကြုံ နုသေးတဲ့ သူပုန်လူထွက်ခါနီး သတင်းထောက်ပေါက်စနဲ့ ဘန်ကောက်မြို့လယ်ခေါင်က မြန်မာသံရုံးကို စီးထားသူ သေနတ်သမားတို့ရဲ့ ပထမဆုံး အင်တာဗျူးပါပဲ။
တကယ်ကတော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေမှာဆိုရင် ဒီလို အကြမ်းဖက်စီးနင်းမှုတွေ၊ ဓားစာခံကိစ္စတွေအတွက် အထူး သတင်းထောက်တွေ ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီ ဘာသာရပ်အတွက် အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ သတင်းသမားတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မြန်မာသတင်းလောကမှာတော့ အခုချိန်အထိ ဒါမျိုးလေ့ကျင့်ထားတာ၊ ဒီဘာသာရပ်ကို သင်ကြားတယ်ဆိုတာမျိုး မကြားမိသေးပါဘူး။ နောက်တခါ ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဟာ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှ တခါလောက် ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ ခန့်မှန်းဖို့ သိပ်မလွယ်။ နီးတဲ့လူ၊ ဖုန်းရတဲ့လူကပဲ မေးလိုက်တာ သဘာဝကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါက အခုမှ စဉ်းစားမိတဲ့ အချက်တွေပါ။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်နေပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိပါ။ ဒီအင်တာဗျူး ပြီးသွားတဲ့အထိ ကျနော့်စိတ်ထဲ ယုံတ၀က်၊ မယုံတ၀က်ဖြစ်နေဆဲ။ ကျနော်ဘေးမှာနားထောင်နေကြတဲ့ ကိုတင့်ဇော်နဲ့ ကိုမင်းဇော်ရွှေတို့ကတော့ လက်မ ထောင်ပြနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အစအဆုံး ကြားရတာမဟုတ်။ ကျနော်မေးနေတဲ့ အသံပဲကြားရပြီး ဟိုဘက်ကဖြေသံကို မကြားနိုင်။ အဲဒီကာလ DVB ဟာ ဆင်းရဲနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် တယ်လီဖုန်းနဲ့ အသံဖမ်းစက်ကြား ချိတ်ပေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၃၀ တန် ကြားခံကိရိယာကိုတောင် မ၀ယ်နိုင်သေး။ ဘန်ကောက်ဗျူရိုတာဝန်ခံ ကိုခင်မောင်ဝင်း ဆင်ပေးထားတဲ့ ကိုယ်ဘာသာ ဘေးမှာ အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းကို ၀ိုင်ယာကြိုးအသွယ်သွယ်နဲ့ဆက်ပြီး အသံဖမ်းနေရတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အော်စလိုရုံးက ဖုန်းခေါ်လာချိန်ကိုတောင် မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကပဲ အရင် ခေါ်ပြီး သံရုံးကို စီးထားတဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ အင်တာဗျုးရထားတဲ့အကြောင်း၊ အမြန်ပို့ချင်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် အော်စလိုရုံး တာဝန်ကျ သတင်းအယ်ဒီတာက ကိုဝင်းနိုင်ဦး (နောက်ပိုင်း RFA ကို ပြောင်းသွားသူ) ဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း ကျနော်အင်တာဗျုးရတာကို အတော်အံ့သြနေပုံရပါတယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း အံ့သြနေတုန်း။
အဲဒီကာလတွေဟာ အခုခေတ်လို အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး သိပ်မကောင်းသေးတဲ့အတွက် တနေရာနဲ့တနေရာ ဆက်သွယ် အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့ သိပ်မလွယ်သေးပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ အခုခေတ်မှာ ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူတဲ့အပြင် ရုံးခန်းတွေလည်း စနစ်တကျရှိတဲ့နေတဲ့အတွက် အရေးကြီး အင်တာဗျုးတခုခု မလုပ်ခင်မှာ ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေ မေးသင့်တယ်ဆိုတာကို အယ်ဒီတာတွေ။ တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်အကြံဉာဏ်တောင်းဖို့ လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလကတော့ မြေအောက်တပိုင်းသတင်း ဌာနလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ကျနော်ဘေးမှာ မေးမြန်းတိုင်ပင်ဖို့ ဘယ်အယ်ဒီတာမှမရှိ။ နော်ဝေးကလူတွေကလည်း အိပ်ရာက မထသေးဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်မရလိုက်ပါ။ နောက်တခါ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဖုန်းရဖို့ပဲ နင်းကန်လျှောက်ခေါ်နေပြီး (ဖုန်းရမယ်လို့ သိပ်ထင်မထားပေမယ့်) တကယ်လို့ ဖုန်းရရင် ဘာတွေမေးမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အားနည်းခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာလွှင့်တဲ့ အဲဒီ အင်တာဗျုးကို နားထောင်ပြီးတဲ့နောက် ကျနော် အိမ်ပြန်လာပါတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး။ ကျနော့်ဆီ ၀င်လာတဲ့ဖုန်းတွေက မနည်းလှ။ အဲဒီထဲမှာ အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဆီ သွားရောက်လေ့လာနေကြတဲ့ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ နိုင်အောင်နဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့က ထိပ်ဆုံးပါပဲ။ ပြီးတော့ တခြားသတင်းဌာနက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သတင်းထောက်တွေ။ သူတို့ အဓိကမေးတာက ဘယ်နံပါတ်နဲ့ရလဲ။ အဲဒီနံပါတ် ပေးနိုင်မလားပေါ့။ တကယ့် ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲပါပဲ။
October 6, 2015 at 12:58 AM Reply
သံရုံးစီးနင်းမှုဖြစ်ပြီးကာစ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ မနီလွိုင်းကျောင်းသားစခန်းတွင် သတင်းယူနေစဉ်
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ABSDF အရန် ဗဟိုကော်မီဝင် ဖြစ်နေတုန်း။ ကိုနိုင်အောင်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကိုမိုးသီးဇွန်က ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုတော့ သူတို့တောင်းတာကို ကျနော်မပေးလို့ ဘယ်သင့်တော်ပါ့မလဲ။ တဖက်ကလည်း ကိုယ့်သတင်းရင်းမြစ်ကို မပေးချင်ပြန်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကျနော် တကယ်ခေါ်လို့ရတဲ့နံပါတ်နဲ့ ခေါ်လို့မရတဲ့ နံပါတ် နှစ်မျိုးကိုတွဲပြီး “အဲဒီနံပါတ် နှစ်ခုစလုံးကိုသာ ခေါ်ကြည့်ပါ။ တလုံးမဟုတ် တလုံးရနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။
တခြားသတင်းဌာနတွေက လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဖက်တွေကိုလည်း ဒီလိုပဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းတာလား။ ကံဆိုးတာလား မပြောတတ်။ ကျနော်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ကိုဂျော်နီနဲ့ အင်တာဗျုး မရလိုက်ပါဘူး။ ကံဆိုးတယ် ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှမရဘဲ ကျနော်တဦးတည်းသာ အင်တာဗျုးရတဲ့အတွက် ကျနော်နဲ့ ကိုဂျော်နီတို့ နဂိုကတည်းက အဆက်သွယ် ရှိထားလားဆိုပြီး သံသယ ၀င်ကြတဲ့အမှုပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနေ့ည ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ကိုဂျော်နီနဲ့ကျနော် ဖုန်းတခါ ထပ်ရလိုက်ပါသေးတယ်။ မနက်ဖြန် သေနိုင်တယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ ကိုဂျော်နီဟာ သူ့ရင်ထဲရှိတဲ့ စကားတွေအားလုံးကို အဲဒီညက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေလူအဖြစ် သဘောထားပြီး ဒီကိစ္စကို ဆောင်ရွက်တာပါ။ ကျနောလည်း AB ရဲဘော်ဟောင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတာ နှစ်တွေကြာခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ မထူးလာဘူးဗျာ၊ ပွန်း (စစ်တုရင် ကစားပွဲမှ စစ်သည်ရုပ်) တွေနဲ့ တိုက်နေလို့ ဘာမှမထူးဘူး၊ Key တွေ၊ ထိပ်မှာထိုင်ပီး အမိန့်ပေးနေသူတွေကို ရှင်းပစ်နိုင်မှ မြန်မာနိုင်ငံအခြေနေက ပြောင်းမှာဗျ” ဆိုတဲ့ စကား အပါအ၀င် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် သူ့အမြင်၊ တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာ စစ်မတိုက်ဘဲ ဆယ်မီနာတွေ၊ အစည်းဝေးတွေပဲ လုပ်နေကြပြီး အချိန်ဖြုန်း၊ ငွေဖြုန်း လုပ်နေကြတယ်ဆိုပြီး ကိုဂျော်နီပြောသွားတာကို ကျနော်မှတ်မိနေပါတယ်။
AK 47 တဖက်၊ ခွပ်ဒေါင်းအလံ တဖက်နဲ့ ကမ္ဘာကျော်သွားသူများ
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ကိုဂျော်နီဟာ သေကံမရောက် အသေက်မပျောက်ဆိုသလို အဲဒီနေ့နံနက် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ထိုင်း ဒု နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ဓားစာခံတွေနဲ့ အစားထိုး လဲလှယ်ကာ သူတို့နဲ့အတူ တောထဲအထိ လိုက်သွားမယ်လို့ သဘောတူညီချက် ရလိုက်ပါတယ်။
“ဒီလူတွေက အသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ် နေချိ်န်မှာ ငါက ရဲအဖမ်းခံရမှာစိုးလို့ သံရုံးရှေ့ မသွားရဲဘူးဆိုတာ မဟုတ်သေးပါဘူး” ဆိုပြီး ကိုယ်ဖာသာ ရဲဆေးတင်ပြီး အဲဒီနေ့က သံရုံးရှေ့ကို အရဲစွန့်ရောက်နေတဲ့ ကျနော်လည်း သတင်းယူရတာ ဖတ်ဖတ်မောပါပဲ။ သံရုံးထဲ ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းမရလို့ အလံတိုင်ကြီးကို ခုတ်လှဲလိုက်တာ၊ ဆေးရုံဖက်အသွားမှာ ကားဘီး နွံနစ်လို့ မိုးပေါ်သေနတ်ထောင်ဖောက်တာ၊ နောက်ဆုံး လုံမဏီပန်းခြံဘေးက ရဲသင်တန်းကျောင်းရောက်မှ အားလုံးအဆင်ပြေပြီး ဓားစာခံတွေကို လွှတ်ပေး၊ ခွပ်ဒေါင်းအလံတဖက်၊ AK သေနတ် တဖက်ကိုင်ပြီး လက်ဝှေ့ယမ်းပြ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒု ၀န်ကြီးနဲ့အတူ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တက်သွားတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ တကယ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။
အဲဒီဖြစ်စဉ်တခုလုံးကို Live ပုံစံနဲ့ အသံဖမ်းစက်ထဲ ပြောထည့်ထားပြီး လိုသလောက် တည်းဖြတ်ပို့လိုက်တဲ့ ကျနော်ရဲ့သတင်းဟာ အဲဒီညက အတော်လူသိများသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသံလှိုင်း မကြည်တဲ့ DVB ကို လူတွေခဲရာခဲဆစ် နားထောင်မှု တိုးလာစေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းဟာ ကျနော့် သတင်းထောက်ဘ၀မှာ ပထမဆုံးပို့ဖူးတဲ့ Live သတင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရဟတ်ယာဉ် တက်သွားပြီး နာရီဝက်လောက်အကြာမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက သံရုံးဘေးရှိ အဆောက်အဦမှာ သတင်းစာရှင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီရှင်းပွဲအတွက် သတင်းထောက်တွေ စုနေတဲ့အထဲ မနေ့ညက ကျနော်နဲ့ ချင်းမိုင်မှာတွေ့မယ်လို့ ချိန်းထားတဲ့ ကိုအောင်ဇော်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သူက အဲဒီ အချိန်မှာ ဧရာဝတီအပြင် RFA အတွက် သတင်းပို့နေသူပါ။ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေအကြား အမျိုးမျိုး ထင်မြင်ချက်ပေးနေပြီး ရဟတ်ယာဉ်ဟာ မဲဆောက်ဘက်က KNU ဥက္ကဋ္ဌရှိတဲ့ နယ်စပ်ဆီသွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။
“ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ မဲဆောက်က အဝေးကြီး။ သူတို့က God Army စခန်းရှိတဲ့ ရတ်ချပူရီက ကမာပုလောစခန်းဆီ သွားတာပါ” ဆိုပြီး ကျနော် ၀င်ပြောမိပါတယ်။ “မင်းက ဘယ်လိုသိတာလဲ” ဆိုပြီး ကင်မရာတွေက ကျနော့်ဖက် လှည့်လာပါတယ်။ သတင်းထောက်ကနေ သတင်းဖန်တီးသူ ဖြစ်သွားမှာစိုးတာနဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုပြောပြီး လျှောချလိုက်ရတာကို ကျနော် အမှတ်ရနေပါတယ်။
October 6, 2015 at 4:59 AM Reply
ရတ်ချပူရီ ဆေးရုံကို ၀င်စီးပြန်ပြီ
ကမ္ဘာကျော်သွားတဲ့ သံရုံးစီးနင်းမှုဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ စွမ်းအားမြင့် စစ်သည်တော်များ အဖွဲ့နဲ့ God Army စခန်းရှိရာ ကမာပုလောဒေသဆီ န၀တတပ်တွေက အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်ဆင်ပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့တပ်တွေ ခံခဲ့ရတဲ့ ထိုးစစ်ထက် အဆမတန်များတဲ့ တပ်အင်အားနဲ့ ထိုးတာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကြီး အလွန်အကျွံ သုံးခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ကျနော်တို့ တပ်တွေလို ဆုတ်လမ်းမထားဘဲ ကမာပုလောစခန်းမှာ ခံစစ်သေသဘောနဲ့ နေရာယူထားတဲ့အတွက် အတော်အထိနာခဲ့တယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်သိခဲ့ရပါတယ်။
ရတ်ချပူရီဆေးရုံစီးနင်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိုဗေဒါ (ဆံပင်ရှည်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်) ကို နယ်စပ်စခန်းတခုတွင် တွေ့ရစဉ်
ဒဏ်ရာရ လူနာက များပြား၊ ဆေးဝါးက မလုံလောက်၊ ကျွမ်းကျင်ဆေးမှူးကလည်း မရှိတာနဲ့ နောက်ဆုံးကြံရာမရဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထဲ ဆရာဝန်ရှာဖို့ ထွက်လာရာကနေ ရတ်ချပူရီဆေးရုံဆီ ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကတော့ ဒါတွေကို မသိပါဘူး။ “နန်စူစန်ဖမားတွေက ရတ်ချပူရီဆေးရုံကို ၀င်စီးထားပြန်ပြီ” ဆိုပြီး ထိုင်း TV မှာ သတင်းစကြားလိုက်တာပါ။ ဒီသတင်းကြားတော့ ရတ်ချပူရီကိုသွားဖို့ ကျနော်ကြိုးစားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခြေမနေက အရင်လို မဟုတ်တော့။ သံရုံးစီးနင်းမှု သတင်းအပို့ကောင်းလို့၊ ဂျော်နီနဲ့ အင်တားဗျုးအရကောင်းလို့ စတဲ့အချက်တွေအပေါ် မူတည်ပြီး ထိုင်းထောက်လှမ်းရေးတွေက ကျနော်တို့ကို သိပ်မယုံတော့ပါ။ ကီလို ၈ ဖက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ DVB ရုံးကို ပိတ်ပြီး ရုံးဝန်ထမ်းတွေအားလုံး မြေအောက်လျှိုးပြီး ကိုယ်လျှို့ဝှက်ခန်းတွေကနေ သတင်းပို့နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။
လျှို့ဝှက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း နေတဲ့နေရာပဲ လျှို့ဝှက်ပြီး သတင်းယူရတဲ့ နေရာတွေကတော့ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေ၊ ဆယ်မီနာခန်းမတွေဆိုတော့ သိပ်မထူးပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီသတင်းမကြားခင် တရက်ကတောင် ဘန်ကောက် ဟိုတယ်တခုမှာ ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ ခရီးသွားတိုးမြင့်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ န၀တရဲ့ ခရီးသွားဝန်ကြီးနဲ့တောင် ကျနော် အင်တာဗျူး လိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရတ်ချပူရီသွားနိုင်ဖို့ ID ခိုင်တဲ့ အဖော်လိုက်ရှာရင်း မနေ့က သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ အတူတူတက်ခဲ့သူ (အဲဒီအချိန်က RFA မှာ ယာယီ တာဝန်ထမ်းနေသူ) ဒေါ်တင်ထားဆွေနဲ့ အဆက်သွယ် ရလိုက်ပါတယ်။ RFA ဗီယက်နမ်ဌာနက သတင်းထောက်တဦး၊ ထိုင်းကားဆရာ၊ ဒေါ်တင်ထားဆွေနဲ့ ကျနော်တို့ ၄ ဦး ရတ်ချပူရီကို ရောက်တော့ နေ့လည် တနာရီလောက် ရှိနေပါပြီ။ ဆေးရုံးဝင်း ၀င်ပေါက်အားလုံးကို ပိတ်ထားပြီး အားကစားကွင်း ရှိတဲ့ဖက်မှာ သတင်းထောက် အများကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘန်ကောက်သံရုံး စီးနင်းစဉ်ကလိုမျိုး အင်တာဗျုးများ ရမလားဆိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းတလုံးနဲ့ ဟိုဆက် ဒီဆက် လိုက်မေးခဲ့ပေမယ့် ဘာအင်တာဗျုးမှ မရလိုက်ပါဘူး။
ညနေ ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ် DVB ပထမအကြိမ် အသံလွှင့်ချိန်အတွက် သတင်းပို့တဲ့အထိ အခြေအနေက ဘာမှ သိပ်မထူးခြား။ ဒါပေမယ့် ညနက်လာတာနဲ့အမျှ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်က လှုပ်ရှားမှုဟာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးထက် ဖမ်းဆီးဖြိုခွဲရေးဘက် နည်းနည်းယိမ်းလာသလားလို့ သံသယ၀င်စရာ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခါ ကျနော်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ ထိုင်းသတင်းထောက်တွေ အပါအ၀င် ကျနော်စကားပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့ ထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်ဟာ ဘန်ကောက်သံရုံး စီးနင်းစဉ်ကနဲ့ မတူတော့ပါ။ ဘန်ကောက်သံရုံး စီးနင်းမှုဟာ မြန်မာအချင်းချင်း ပြဿနာလို့ သူတို့က မြင်ကြပြီး ကိုဂျော်နီတို့ အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကို “ဒီး ဒီး” လို့ လက်မ ထောင်ပြခဲ့သူတွေပါ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကျနော်တို့လို ကျောင်းသားတပိုင်း သတင်းထောက်တွေကိုလည်း သူတို့က လေးစားနေတာပါ။
ဒါပေမယ့် အခု ရတ်ချပူရီ ဆေးရုံကိစ္စမှာတော့ သူတို့အမြင်က အဲဒီလိုမဟုတ်တော့။ ထိုင်းလူမျိုးတွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေအဖြစ် မြင်လာနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းသူတွေကလည်း သံရုံးတုန်းကလို နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ကိုင်တွယ်တယ် ဆိုတာထက် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ပြဿနာအဖြစ် ရှုမြင်ပုံရပြီး ကိုင်တွယ်ပုံပြောင်းသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းသတင်းထောက်တွေ ကြားမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဆေးရုံထဲ TV ရိုက်ခွင့်ရတဲ့ ထိုင်းချယ်နယ်က Footage တွေကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့က အရင်စစ်ဆေးပြီး၊ ဆေးရုံဝင်းထဲက သေနတ်သမားတွေနဲ့ ဓားစာခံ အခြေအနေတွေကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီးမှ မီဒီယာမှာပြဖို့ ပေးလိုက်တာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဆင်ဆာမရှိဘူးဆိုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီဖြစ်စဉ်ကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျနော့်စိတ်ထဲ တမျိုးပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ ဆေးရုံဝင်းတံခါးရှေ့က သတင်းထောက်တွေကို နောက်နည်းနည်း ဆုတ်ပေးဖို့ပြောပြီး သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ ကာလိုက်ပါတယ်။ တခါ ည ၁ နာရီလောက်မှာ နောက်ထပ်တခါ ထပ်ဆုတ်ခိုင်းပြီး သံဆူးကြိုးဝိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချဲ့လာပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ကင်မရာနဲ့ ဆေးရုံဝင်း တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားအောင် ဖန်တီးပြီး ၀င်ရှင်းဖို့ပြင်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။
October 6, 2015 at 5:00 AM Reply
ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ မနက် ၅ နာရီလောက်မှာ “၀ုန်း” ဆိုတဲ့ ပေါက်ကွဲသံကြီးကြားရပြီး အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ကျနော် လန့်သွားပါတယ်။ အသံဖမ်းစက်ကို Pause လုပ်ထားပေမယ့် အဲဒီအသံကိုဖမ်းဖို့ အချိန်မမီလိုက်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လက်နက်ငယ်သံတွေ အဆက်မပြတ်ကြားရပြီး ကောင်းကင်ပေါ်မှာလည်း ရဟတ်ယဉ်အသံတွေ ဆူလို့။ ကျနော်လည်း တခြားသတင်းထောက်တွေလို လှဲအိပ်ပြီးနေရာယူ၊ အသံဖမ်းစက်ကို အပေါ်ထောင်၊ မျက်စိက ဆေးရုံဘက် ချောင်းကြည့်ပေါ့။ အဲဒီလို နေရာယူနေစဉ် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်က မီးဆလိုက်က ကျနော်ခေါင်းပေါ် တည့်တည့်ထိုးနေသလားလို့ ထင်ရအောင်ကို လင်းထိန်လွန်းလှပါတယ်။
ထိုင်းစစ်တပ်ဆီ လက်နက်ချလိုက်တဲ့ God Army တပ်မှူး ၂ ဦးနဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ထက်အောင်ကျော်)
ထွက်ပြေးသွားတဲ့ သေနတ်သမားတဦးကို ရဟတ်ယာဉ်က လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုပြီး သတင်းထောက်တွေအကြား ပြောသံကြားတော့ ပိုလန့်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ Live လွှင့်နေတဲ့ TV တွေအားလုံးကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့က တားဆီးပြီး လုံခြုံရေးအဖွဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံကိုရိုက်နေတဲ့ ထိုင်းကင်မရာသမား ၂ ဦးကိုလည်း အဲဒီတပ်ဖွဲ့က တားဆီး၊ ဟိန်းဟောက်၊ သေနတ်ပြ ခြိမ်းခြောက်နေတာကို ကျနော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထိုင်းသတင်းထောက်တွေတောင် ဒီလို အဟောက်ခံနေရရင် ငါ့လို ဘာ ID မှမရှိတဲ့ မြန်မာဆိုရင်တော့ သေနတ်သမားနဲ့ ကြံရပါလားဆိုပြီး နှိ်ပ်ထည့်လိုက်ရင် ဒုက္ခဆိုပြီး ကြောက်စိတ်က၀င်၊ တဖက်ကလည်း အသံတွေကို ရအောင်ဖမ်း၊ မြင်ကွင်းတွေကို မှတ်မိအောင်ကြည့်နဲ့ အတော်စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။
အံ့သြဖို့ ကောင်းတာကတော့ ဒေါ်တင်ထားဆွေပါပဲ။ သူပုန်လူထွက်ခါစ ကျနော်က အဲဒီလို ကြောက်ဖို့ စိတ်ကူးနေစဉ်မှာ သူက ဘာမှမကြောက်ဘဲ မုန်ဘိုင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ FRA မနက်ပိုင်း အစီစဉ်အတွက် Live သတင်း ပို့နေပါတယ်။ DVB ကတော့ အဲဒီအချိန် အော်စလိုကလူတွေ အိပ်ကောင်းတုန်း။ မနက်ပိုင်း အစီစဉ်လည်း မရှိသေးတဲ့အတွက် အသံတွေ ဖမ်းထားရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တနာရီလောက် ရှုပ်ယှက်ခပ်ပြီးနောက်မှာတော့ အားလုံး အိုကေသွားပြီ၊ ဓားစာခံတွေကို ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပြီလို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေနတ်သမားတွေကို ဘယ်လို အရေးယူသလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ ပြောမသွား ပါ။ သေနတ်နဲ့ခုခံလို့ ပစ်သတ်လိုက်ရသလိုလို၊ လွတ်သွားတဲ့တဦးကို လိုက်ဖမ်းနေဆဲဖြစ်သလိုလိုနဲ့ သိပ်မရှင်းလှ။ ဆေးရုံဝင်းထဲကိုလည်း သတင်းထောက်တွေကို ၀င်ကြည့်ခွင့် မပေးသေးပါ။ ဒါပေမယ့် အခြေနေအရပ်ရပ်ဟာ အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တညလုံး အိပ်ရေးပျက်ထားတဲ့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ဟာလည်း ဆေးရုံးဝင်းထဲ ၀င်ကြည့်ခွင့်ရမယ့် နေ့လည်ပိုင်းအထိ မစောင့်တော့ဘဲ ဘန်ကောက်ကို ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ညနေပိုင်း သတင်းမပို့ခင်လေးမှာ ၀င်လာတဲ့သတင်းတွေအရ VBSW နဲ့ God Army က ရဲဘော် ၁၀ ဦးစလုံးကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့က အသေပစ်သတ်လိုက်ပြီး အဖြူရောင်ပိတ်စတွေနဲ့ စည်းထားတဲ့ အလောင်း ၁၀ လောင်းကို ပြသထားတာ TV မှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းသိရတဲ့ အချက်တွေအရ သံရုံးစီးနင်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိုဂျော်နီဟာ ကမာပုလော တိုက်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရထားတဲ့အတွက် ဒီဆေးရုံစီးနင်းမှုမှာ မပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။ VBSW အဖွဲ့မှ ကိုဗေဒါက ဦးဆောင်ပြီး God Army တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ God Army ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ ကမာပုလောစခန်းဟာ န၀တရဲ့ ထိုးစစ်တင်မကဘဲ ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ဖိအားပေးမှုကိုပါ ခံရပြီး တလလောက်အကြာမှာ ကမာပုလောစခန်း ကျသွားပါတယ်။
နောက်ထပ် ၈ လ ၀န်းကျင်လောက် ကြာတဲ့အခါမှာတော့ God Army တပ်မှူး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျော်နီနဲ့ လူသာထူး အပါအ၀င် တပ်ဖွဲ့ဝင် တဒါဇင်ခန့် ထိုင်းစစ်တပ်ဆီမှာ လက်နက်ချတယ်ဆိုပြီး သတင်းဝင်လာပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအတွင်း ဆုန်ဖွန်း (Suan Phung) မြို့က နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း စခန်းထဲမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲဒီသတင်းစာရှင်းပွဲကျမှ နာမည်ကြီးလှတဲ့ God Army တပ်မှူး ၂ ဦးကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် မြင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
သံရုံးကို ၀င်စီးတဲ့ VBSW အဖွဲ့မှ ကိုဂျော်နီကိုတော့ ကျနော် မြင်ဖူးခွင့် မရလိုက်ပါဘူး။ သူဟာ ကမာပုလောစခန်း ကျပြီးနောက် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖိအားပေးမှု များလွန်းတဲ့အတွက် KNU တပ်မဟာ ၄ ဒေသကနေ တပ်မဟာ ၆ နဲ့ မဲဆောက် ဒေသဘက်ရှိ တပ်ပေါင်းစု ဗဟိုဘက်ကို သွားနုိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီလိုသွားနိုင်ဖို့ KNU ဗဟိုက ကိုယ်စားလှယ်တဦးနဲ့ NLD-LA ဗဟိုက ကိုယ်စားလှယ်တဦးတို့ ဟွေးနန်းခေါင်ရွာကနေ တပ်မဟာ ၄ ထိန်းချုပ်နယ်ထဲဝင်ပြီး ကိုဂျော်နီနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ဘယ်နေ့လာခေါ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီလို လာခေါ်မယ့်ရက် မတိုင်မီ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ကိုဂျော်နီ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်တွေက ပြောပါတယ်။
သူ ပျောက်သွားတဲ့အချိန်က လုံးဝသတင်းမရဘဲ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကျမှ ဒီသတင်းကို VBSW အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကိုဂျော်နီအကြောင်း သတင်းမကြားရတော့တာ ဒီနေ့အထိပါပဲ။ ။